Anogovera mvura → Kusimba • Gyms • Kunwa mvura muGym Warsaw
Iwe unoda here mvura inogovera mumakirabhu emitambo, masejimendi? Iyo kambani yeWater Point inopa dzisiri-cylinder mvura dzinogadzira mvura, vanonwa doro, iko kunobva vatungamiriri venyika muindasitiri, yatagovera ndega muPoland.
Zviitiko zvemitambo uye chero kurovedzera muviri zvinoita kuti muviri wedu urasikirwe nekukurumidza mvura uye zvicherwa zvakakosha zvirimo. Ndosaka zvichikosha kwazvo kudzosera izvi zvinongedzo nekutarisira mvura yemuviri uye zvicherwa zvakaringana.
Izvi zvinofambisa kugwanika kusingaperi kwemvura yakachena uye yakachena mvura panguva yekushanda nesimba. Yakarongedzwa zvakakwana, yakachena uye yakapfuma mune zvakasikwa zvicherwa mvura inogona kugara ichiwanikwa mumakirabhu emitambo uye majimendi anotenda kune vanhasi mvura yekunwa mvura.
Vanhu vanoshandisa makirabhu akasimba pamwe nevanhu vanoshanda ipapo vanozokoshesa kuravira uye kutsva kwemvura inogara iripo kubva kune disenser.
Cylinder-isina kunwa mvura ekugezesa mvura inogezeswa yakananga kune mvura yekuwanikwa system inobvumira yekuenderera mberi uye isina-dambudziko-rekushandisa kwemvura yakachena panguva yekusimbisa makirasi kana kupatsanuka pakati pawo.
Dhizaini yazvino yeavo vanowanika mahofisi, akanyatsoenderana nechero remukati memitambo yekusimbisa makirabhu nemajimu, ndiyo mukana wakanaka pano.
Midziyo yakadaro inogona kuwanikwa mune chero nzvimbo yeiyo kirabhu yekusimbisa muviri, semuenzaniso munzvimbo inofanirwa kutandara kana yakanangana nemujimu.
Izvo zvinozivikanwa kuti kuti uchengetedze hutano uye hune hutano huwandu, iwe unofanirwa kunwa kana maviri malita emvura pazuva, uye panguva yekurovedza muviri, kudiwa kwemuviri wemvura kunowedzera zvakanyanya uye huwandu hwayo hunofanira kuwedzera.
Mvura inobatanidzwa mune zvese biochemical process mumuviri wedu. Kukwanira hydration yemuviri kunoita kuti ushande uye kurovedza muviri zvakanaka. Kunwa mvura panguva yekurovedza muviri kunovandudza kushanda zvakanaka kwemuviri uye kunobatsira kudzidziswa. Kuwanda kwemvura yakadhakwa panguva yekusimba kwemakirasi kunoenderana nehurefu uye huremu hwekurovedza muviri, pamwe neiyo tembiricha yekushisa.
Kune vanhu vanodzidzisa, iyo nzvimbo yavanodzidzisa, iwo mamiriro ekunze nemidziyo zvakakoshawo. Nhasi, zvakanyanya uye zvakanyanya kutarisirwa kunobhadharwa kune hupenyu hune hutano, saka kutarisirwa kunobhadharwa kana iyo yekudyira ichikwanisa kupa imwe nyaradzo, i.e. mvura nyowani inowanikwa panguva yekudzidziswa.
Iyo inonwa mvura yekuparadzira inokwanisa kusangana netarisiro dzakadai, saka inowedzera kukwezva uye mukurumbira wenzvimbo yacho.
Iyo inodzosera mvura inotsiva mhinduro yetsika yemabhotoro mineral mvura. Vanonwa mvura vanogadziridza vanoiswa mumakambani, nzvimbo dzejimendi uye masimba emitambo yekuwedzera nyaradzo yekugara munzvimbo idzi, uye zvigadzirwa zvepamusoro zvemhando yepamusoro zvinoshandiswa mukugadzirwa kwezvinhu izvi zvinowedzera kuvaita kushongedzwa kwemakamuri.
Iyo mvura inopihwa inogara iri nyowani uye yakachena.
Kunwa mvura vanogovera mhinduro yechisikigo uye isingadhuri, uye nekudaro vanoratidzika kazhinji kazhinji munzvimbo dzeveruzhinji, masangano, mahofisi, uye mumakirabhu emitambo nemitambo yemitambo.
Tekinoroji dzanhasi dzinoshandiswa mukuvaka kweavo vanogovanisa kushanda kwakanyanya.
5 / 5 ( 18 mavhoti )
chena mukirabhu yekusimbisa muviriyakachena mvura mujimimumvura yemahara mujimimumvura inogovera munzvimbo yekumhanyaChitubu mukirabhu yekusimbapitniks mumutambo wekusimbachidhakwa mumutambo wekusimbamvura mumitambomvura mukirabhu yekusimbisa muviri